कुनै पनि विकास बोट राम्रो फसल उत्पादन गर्न अतिरिक्त हेरविचार आवश्यक छ। र विकल्प मध्ये एक - देशमा लागि मल लाउने को एक संस्कृति। यो दृष्टिकोण कालो माटो अक्सर उत्पन्न गर्छ जहाँ यो दल, प्रयोगको लागि विशेष गरी उपयुक्त छ। तसर्थ, जायज भन्दा बढी fertilizing को प्रयोग।
मा उपनगरीय क्षेत्रमा वसन्त मा मल बनाउन सुरु र लेट शरद ऋतु मा समाप्त मात्र, इन्डोर बिरुवाहरु वर्ष भर खुवाइन्छ। त्यसैले, एक व्यावहारिक प्रश्न खडा, के दबाइहरु सर्वश्रेष्ठ प्रयोग गरिन्छ।
बजार मा आज त्यहाँ पहिले नै परीक्षण रूपमा गरिएको र राम्रो-सिद्ध र आधुनिक प्रविधिहरू र खेती को उपलब्धिहरू संग डिजाइन फरक मल को एकदम विविधता छन्।
मल कस्तो "foppish"?
एक यस्तो दबाइ मल "Fertikov" छ। वास्तविक वास्तवमा यो पनि नयाँ छ। तपाईं समयमा "Kemira" जस्ता हालतमा प्रयोग गर्नुभएको छ भने, त्यसपछि तपाईँले "foppish" दबाइ को कार्य परिचित हुनेछ। मल मात्र आज सबैभन्दा सकारात्मक छ, अनिवार्य भएको एक तदनुसार उच्च गुणवत्ता संग "Kemira" जस्तै वाहन छ समीक्षा। तर नयाँ ब्रान्ड अन्तर्गत।
सन्दर्भको लागि: "Kemira" लागूपदार्थको 2011 को शुरुवात देखि रूस मा उत्पादन छैन। तर, यो मल को लोकप्रियता यसलाई बिक्री मा अझै पनि छ, त्यसैले उच्च छ, तपाईं यो लोगो संग बैग पाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो उत्पादनहरु एक नक्कली तर केहि हुन सक्दैन। "Fertikov गाडी।" - मिति, उत्पादन, रूस मा "Kemira" को उत्पादन मा लगे, आफ्नो पूर्ण एनालग उत्पादन
"Foppish" दबाइ को मुख्य आवेदन
"Fop" आफ्नो प्रोटोटाइप जस्तै प्रविधि गरेको छ। फिनिस कच्चा माल को समान घटक मा प्रयोग गरिएको संरचना। तसर्थ, मल गुणस्तर सबै आवश्यक युरोपेली स्तर अनुपालन। तथापि, "foppish" ब्रान्ड अन्तर्गत नयाँ रेखाहरू घटक को एक अलि फरक प्रतिशत संग उत्पादन शुरू गरियो।
को माली को राय मा, पहिलो यो मल को सबैभन्दा सफल आवेदन लाउने छ फूल र fruiting बिरुवाहरु। कारण विशेष जहाँ ध्यानपूर्वक सोडियम, पोटासियम, नाइट्रोजन को अनुपात चुनिएको र तत्व पहिल्याउन दबाइ, को संरचना गर्न, "fop" माली बीच धेरै लोकप्रिय छ र इनडोर बिरुवाहरु लागि आदर्श छ।
औषधि "foppish" विभिन्न रङ को granules एक powdery स्फटिक पदार्थ जस्तो देखिन्छ। सेट बिरुवाहरु को विकास र विकासका लागि आवश्यक आधारभूत घटक समावेश छ। पदार्थ बाध्यकारी बाहेक - सोडियम, पोटासियम र नाइट्रोजन, यहाँ फलाम, मैंगनीज, जस्ता र अन्य खनिज पाउन सकिन्छ। यस्तो संरचना, तन्तु र फल ovary को गठन क्रियाशीलता blooming फूल लम्ब्याउनु र यसलाई थप तीव्र बनाउन, सुधार रंग। तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यो तैयार मा क्लोरीन र यसको घटक, बिरुवाहरु गर्न अत्यन्तै हानिकारक हो जो समावेश गर्दैन।
यो मल एकदम घरमा र बगैचा क्षेत्र प्रयोगको लागि सुविधाजनक छ जो 20 र 100 ग्राम, सानो पैक मा बिक्री गरिन्छ। दबाइ को खपत अन्य मल तुलनामा आर्थिक अलग छ।
सबैभन्दा माली र अवैतनिक houseplant मल लोकप्रिय "Fertikov सुइट" एक विश्वव्यापी उपाय हो। न्यूनतम प्रवाह पानी5लिटर मा शीर्ष बिना 1 चम्मच दर संग यो माली समीक्षाएँ साँच्चै शानदार परिणाम दिन्छ। फल बाली नाटकीय ovaries संख्या वृद्धि, फल राम्रो बढ्न। फूल मा बिरुवाहरु तन्तु ठूलो बन्न र आफ्नो रंग थप Saturated बन्नेछ।
एउटै प्रभाव "Fertikov फूल" उत्पादन र मल छ। अक्सर, यो दबाइ ब्लूम पनि ती बोट जो कुनै आशा गरेका को प्रयोग पछि।
मल "Fertikov सुइट" बिरुवा लागि शीर्ष लाउने, साथै वयस्क लागि हरेक 7-14 दिन पतला फारम प्रयोग गरिएको छ। 3-4 समयमा - यो गर्मी हरेक को हिउँदमा टीन मा houseplants लागूऔषध प्रयोग को लागि।
फूल मल थप एक ड्राई फारममा प्रयोग गर्न सुविधाजनक छ जो "Fertikov", प्रति 14 भूमि वर्गहरूको 1 किलो को दर मा शुरू गरिएको छ। एक पाउच निरूपण गर्न र सही अनुपात।
हाम्रो देश मा रूसी लागि दोस्रो रोटी मानिन्छ जो आलु को खेती, माली बीच धेरै लोकप्रिय छ। मूल बाली राम्रो फसल मल मदत गर्नेछ हासिल गर्न "Fertikov आलु।" दबाइ, क्रप पैदावार वृद्धि गर्न मूल बाली पकने मिति ल्याउन, र आफ्नो गुणस्तर सुधार गर्न मद्दत गर्छ।
उत्पादन यस प्रकार को संरचना विशेष आलु खाना लागि अनुकूलित छ। यो दृष्टिकोण "Fertikov" हालतमा प्रयोग एक विशेष प्रभावकारी परिणाम प्रदान गर्दछ। मल, माली समीक्षा जो रोपण आलु, पछि कहिलेकाहीं लागू पहिलो पटक, उत्साही भन्दा बढी - hilling मा। को granules तिनीहरूले वर्षा को प्रभाव अन्तर्गत भंग जहाँ नम माटो, मा गाडे छन्।
सदाबहार र conifers लागि तयारी
त्यहाँ केही विशेष विशेषता मल "foppish" छन्। को सबैभन्दा ठूलो चासो उदाहरणका लागि, अर्थ, रूपमा सदाबहार लागि वसन्त र गर्मी मल लागि छुट्टाछुट्टै जारी "Fertikov conifer", यस्तो प्रजाति हो। यो दबाइ स्वीकार्य पीएच गर्न माटो अम्लता सुधार र शंकुधारी रूखहरू कायम। एक मल अन्य अम्लीय माटो रुचि त्यस्तो azaleas, बगैचा र जंगली ब्लूबेरी, rhododendrons र अन्य रूपमा, बिरुवाहरु लागि सिफारिस गरिएको छ। वसन्त तयारी एक मल loosening अप बन्द साथ, superficially मात्र योगदान। को गर्मी मा बिरुवाहरु पतला उपकरण पानी हाले "foppish"।
मल समीक्षा अन्य प्रजाति जस्तै सकारात्मक छ, उनको गुण कारण परिदृश्य डिजाइनर बीच धेरै लोकप्रिय भयो।
दबाइ अन्य प्रजाति
कुनै कम महत्त्वपूर्ण देश घर र सुन्दर lawns को परिदृश्य बनाउदा के पनि "fop" बाट एजेन्ट मदत गर्नेछ। मल, यसलाई प्रयोग गर्न सल्लाह जो माली समीक्षा परिदृश्य डिजाइन को कुनै पनि आकर्षक लन शानदार तत्व बाहिर सबैभन्दा बनाउने एक माध्यम हो।
सबै आवश्यक छ - ड्राई फारममा मल गति जब वसन्त बनाउन छ, तिनीहरूलाई मर्मत र प्रशस्त मात्रामा लन पानी पानी हाले। पछि घाँस समय समयमा प्रति 100 वर्गहरूको 5-6 किलो को दर मा खुवाउनुभयो। सामान्यतया, आवेदन बाहिर गर्न 2-3 को लन mowing पछि सिफारिस गरिएको छ। पहिले र moisturize गर्न आवश्यक माटो fertilizing पछि एकै समयमा।
र सायद यो उनको गर्मी घरेलु कुनै पनि माली लागि उपयोगी छ जो एक थप मल, उल्लेख लायक छ। यो जाडो लागि तयार इरादा "Fertikov शरद ऋतु"। दबाइ विशेष बारहमासी बिरुवाहरु लागि डिजाइन गरिएको छ र शरद ऋतु खनाइ सुख्खा फारम प्रयोग गरिएको छ। यो मल लेट अगस्ट र प्रारम्भिक सेप्टेम्बर, भूमि को 30 वर्गहरूको एक प्याकेजको दर लागू गरियो।
यस दबाइ को प्रयोग बारहमासी बाली सजिलो भएको जाडो सहन मदत गर्नेछ र थप सक्रिय निम्न वसन्त विकास।
मर्यादा "foppish" मल
हामी माली छैन जो उत्पादन "fop" परिचित, अक्सर यो मल यस्तो ठूलो लोकप्रियता को कारण के छ, प्रश्न उठ्छ। निर्माता यसको मुख्य घटक को प्रतिशत ठूलो ध्यान दिन्छिन् भन्ने तथ्यलाई। यो साथै मल को आवेदन दौरान, संस्कृति को खाता सुविधा र बोट विकास चरण मा लिन्छ।
अवस्था विभिन्न प्रकारका विशेष एजेन्ट र केही रुचाउने मोड को एकाग्रता सिफारिस गर्दा। यो सबै जानकारी प्याकेज मल "foppish" निर्देशन सामान्यतया उल्टो पक्षमा मुद्रित छ जसमा बैग मा पाउन सकिन्छ।
निर्माता गरेको सिफारिसहरू अनुसार, बलियो बोट, सुन्दर inflorescences र राम्रो फसल तपाईं मात्र राम्ररी यसलाई भंग गर्न चाहेको दबाइ चयन गर्न आवश्यक प्राप्त गर्न, र समय बिरुवाहरु खुवाउन।
अन्तर आधारभूत सिद्धान्तहरू: के स्ट्रबेरी देखि स्ट्रबेरी distinguishes
कसरी PDF मा JPG रूपान्तरण गर्न?
जानकारी सुरक्षाको रूसी सिद्धान्त: मुख्य बुँदाहरू
ध्वनि एडीसन रेकर्ड र reproducing लागि पहिलो उपकरण आविष्कार
शाखा, आधिकारिक वेबसाइट र समीक्षा: को मानविकी (MUH) को लागि आधुनिक विश्वविद्यालय
एक व्यक्ति चिज लागि प्रयोग
रूस मा हिउँदमा बाँकी: कहाँ जाने?